Mourinho Oo Ku Eedeeyay Arsene Wenger Inuu Ka Been Sheegay Dhaawacii Alexandre Lacazette & Tababaraha Arsenal Oo Ka Jawaabay
Wednesday December 06, 2017 - 19:51:53 in Wararka by Editor Caynaba News
London(CYN)Tababaraha Arsenal Arsene Wenger ayaa u jawaabay Jose Mourinho ka dib markii uu tababaraha Manchester United ku eedeeyay dhigiisa Gunners inuu ka been
sheegay dhaawaca Alexandre Lacazette.
Weeraryahanka Faransiiska ayaa bartanka ka ahaa sheeko qariib ah ka hor kulankii isbuucii la soo dhaafay ee Emirates Stadium ku dhexmaray Arsenal iyo Manchester United.
Isagoo la bedelay waqtigii nasashada ee kulankii ay Arsenal ka badisay Huddersfield, Arsene Wenger ayaa shaaciyay in Lacazette uu soo gaaray dhaawac gumaarka ah islamarkaana ay hubaal tahay inuu seegayo kulanka ay la ciyaarayaan Manchester United.
Laakiin Alexandre Lacazette ayaa ka soo muuqday shaxda Arsenal ee kulankii United waxaana uu dhameystay 90ka daqiiqo isagoo dhaliyay goolka kaliya ee Arsenal kulankii looga badiyay 3-1.
Ka dib ciyaarta, Mourinho ayaa ku weeraray Wenger qaabkii uu uga been sheegay taam ahaanshaha weeraryahanka reer France, waxaana uu mar kale soo hadalqaaday ka hor kulanka Manchester Derby ee isbuuca soo socda.Tababaraha United ayaa yiri: "Runta miyaad dooneysaa? Runta waxa ay tahay Bailly wax fursad ah uma heysto inuu ciyaaro kulanka Manchester Derby. Jones iyo Fellaini fursad ayay u heystaan. Zlatan fursad weyn ayuu u heystaa, Matic waa dhaawac laakiin wuu ciyaari doonaa. Warkeyga lama mid ahan sida sheekada Lacazette iyo Silva. Waxayga waa run.”
Laakiin Wenger ayaa u jawaabay Mourinho isagoo sheegay in hadaladii uu ka yiri dhaawaca Lacazette inay ahaayeen wixii ay u sheegeen dhakhaatiirta kooxda.
"Waxaan u maleynayay inuusan ciyaari karin laakiin ugu danbeyntii wuu ciyaaray” ayuu yiri tababaraha Arsenal. "Maxaad dooneyseen inaan sameeyo? Isagoo taam ah miyaan ka soo tagi lahaa?
"Mar walba si daacad ah ayaan u hadlaa. Xaqiiqdii waxaan u maleynayay inuusan ciyaari karin. Waxayna aheyd wixii la ii sheegay. Subixii Jimcaha ayaan tijaabinay, xitaa markii kulanka la gaaray ma aanan hubin inuu ciyaari karo.
"Laakiin wuu isku dayay, wuuna ciyaaray. Waa qeyb ka ah kubada cagta.